Cheesy Spread 240g Denmark Brand / Myanmar
O'Tori Baked Corn Snack
All categories All categoriesButter & MargarineCanned & Jarred FruitsCanned & Jarred VegetablesCanned & Prepared BeansCheeseChickenChicken BurgerChicken FranksChicken NuggetChicken PopcornCoffeeCooking OilsDried FishFish CakeFresh & Frozen MeatsFresh & Frozen SeafoodMayonnaiseMilkPotatoesReady To CookSnack FoodsSunflower OilWhipped CreamYeastYogurt
Arla Cheesy Spread 240g Denmark
Sale price5,500 Ks
Stock Code - DAI-002
At Arla, we love milk. We love its nutrition. We love its taste. Our Northern European farmers know quality is everything and our standards are world-class. Our history dates back to the 1880s. Today we reach millions of people all over the world. Our natural milk products aim to help you and your family fulfillahealthy and ambitious life.
Spread on the yummy, cheesy goodness. Arla Cheesy Spread is made from 90% fresh cow’s milk withamild, creamy taste that will leave you craving more! Enjoy this natural source of Calcium and Vitamin A in sandwiches, on toast, or crackers. It’s the perfect breakfast and snacking companion. Arla Cheesy Spread is made from 90% fresh cow’s milk withafat content of 31%. Storage: Store inarefrigerator at 2-8°C before and after opening. Can also be stored at 20-25°C only before opening. Being an Arla product, you can be assured of farm-fresh milk from our farmer-owners who guarantee product safety and quality.
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းပြီး သဘာဝနွားနို့စစ်စစ်မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cheesy Spread ကို (၁၉၃၀) ပြည့်နှစ်တည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း (၈၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Arla Cheesy Spread ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့
ဒိန်းမတ်ရိုးရာ Processed Cheese မှ အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနည်းပညာနဲ့ သိုလှောင်ထားပြီး သာမာန်အခန်းအပူချိန်မှာ တာရှည်သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် သဘာဝနွားနို့စစ်စစ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြည်လင်သန့်စင်တဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ရှိတဲ့ Cheese အရသာကို Arla Cheesy Spread ကပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဆန်းဒဝှစ်ချ်၊ပလာတာ၊နံပြား၊ပေါင်မုန့်တို့နှင့် တွဲဖက်စားသုံးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ချိစ်အရာကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မနက်စာကို ပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ Cream Based ဖြစ်တဲ့အတွက် မနက်စာအတွက်သာမကဘဲ ပါစတာနဲ့အခြားသော ဟင်းလျာများနဲ့လည်း တွဲဖက် ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားကင်တွေ၊ အရွက်သုပ်တွေမှာ အလွယ်တကူထည့်စားနိုင်ပါတယ်။ နံပြားတွေ၊ ချာပါတီတွေနဲ့ တွဲစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟော့ဒေါ့တွေ၊ ဘာဂါတွေ၊ ဆန်းဒဝှစ်ချ်တွေထဲမှာ ထည့်စားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါစတာတွေ၊ စပါကတီတွေမှာ ထည့်ချက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိုပွဲတွေမှာအသုံးပြုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဟင်းချက်တဲ့အခါ ထည့်သုံးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆော့စ်အနေနဲ့လည်း စားသုံးလို့ရပါသေးတယ်။
Halal ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Grand Food Mart ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း Right Weight, Right Size, Right Quality ကိုသာရောင်းချပေးပြီး အရည်အသွေးစိတ်ချရလို့ စားမကောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရည်အသွေးနဲ့ အရသာမကောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည်လဲလှယ်ပေးသည်အထိ အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Milk, palm oil, trisodium phosphate, salt, and lactic acid culture